DAAWO: CBC.VIDEO | ITV.VIDEO
Khudbadii uu Maanta Khamiis jeediyey Bush... DAAWO
Caawa oo Khamiis ah ayaa inbadan oo kamid ah magaalada Baqdaad waxay noqotay mugdi kaddib markii ay korontadu ka go'aday, sida ay kusoo warantay hay'adda AP. Waxaa warku intaas ku daray in korontadu ay magaalada ka tagtay kaddib markii qarax aad u weyn magaalada laga maqlay. Qaraxa oo socdey 15 daqiiqo markaas ayaa korontadu go'day, tan oo ah markii ugu horeysey oo sidaas oo kale korontadu magaalada uga go'day ilaa markii weerarada lagu qaaday Ciraaq. Sawirada ay muujiyeen TV-yada qaarkood ayaa muujinayey magaalada oo mugdi ah.
Sida ay faafisay IOL , wasiirka saxaafada Ciraaq, Mohammed Said al-Sahhaf, ayaa sheegay in maanta oo Khamis ah weerarkii loo geystey Baqdaad ay ku dhinteen 27 qof oo shacab ah ayna ku dhaawacmeen 193 qof.
Mohammad Khatami, Madaxweynaha dalka iiraan ayaa ka digey in dagaalka lagu qaaday Ciraaq ee uu hogaaminayo Maraykanku uu dunida kusoo kordhin doono rabsho iyo xagjirenimo.
"Dagaalkani waa adigoo u baaqaya kuwa xagjira iyo kuwa rabshada raba si ay rabshada ugaga jawaabaan rabshad" ayuu yiri Khatami, sida ay soo werisey hay'adda Iiraan wararka u faafisa ee loo yaqaan IRNA. "Natiijada dagaalkani waa dhimasho dad aan dembi lahayn iyo sii xoojin xagjireyaasha iyo rabshadda" ayuu ku daray Khatami.
Mohammad Khatami oo ka hadlaayey jasiirada iiraan ee loo yaqaan Kish Island ee woqooyiga Gacanka, waxa uu muujiyey sida uu uga xunyahay dadka ku dhintay Ciraaq ee labada dhinacba. "waxaan ka xumahay dadka reer ciraaq ee la caburiyey kuwaas oo dhallinyaradooda loo sadaqeeyey dad fadhiya meel nabad ah" ayuu yiri wuxuuna kusii daray "sidoo kale waxaan ka xunahay dhallinyarada Maraykanka iyo Ingiriiska ee askarta ah ee ka yimid dhinac kale oo dunida ka mid ah si ay ugu dagaalamaan dagaal siyaasad khaldan iyo ujeedo khaldan ee kuwa awood doon ah" [reuters].
Xarunta dhexe ee Muslimiinta Ruushka ee loo yaqaan "Central Islamic Department of Moslems of Holy Russia" ayaa ku baaqday jihaad dhan ka ah Maraykanka, sida uu sheegay muftiga ugu sareeya ee magaciisa la yiraahdo Talgat Tadzhuddin, waxana uu maanta oo khamiis ah warkaas u sheegay Wakaalada Ruushka wararka u faafisa ee loo yaqaan interfax. Tani waa markii labaad oo muddo kabadan 100 sano ay Muslimiinta Ruushku jihaad ku dhawaaqaan, markii koowaad waxay ahayd sannadkii 1941 jihaadkaas oo dhan ka ahaa Germany ayuu yiri Tadzhuddin. Waxay wakaaladaa Interfax intaas ku dartay in Tadzhuddin uusan sheegin nooca jihaadka ee ay qaadayaan, laakiin waxa uu yiri waxaa la filayaa jihaadkaas labo ama saddex maalmood ka dib.
Sida ay werisey wakaalada wararka Australia ee loo yaqaan ABC, siddeed qof ayaa ku dhintay suuq kuyaal Baqdaad oo gantaal lagu weeraray.
Waxa kale oo ABC Australia werisey in Ciraaq erisey weriye katirsan AlJazeera. [ABC]
DAAAWO HALKAN WARARKII SAAKAY -- CBC
Wararka ka imanaya Ciraaq ayaa sheegay in Maraykanka laga soo ridey laba diyaaradood. Sida uu weriyey TV-ga CBC waxaa Maraykanka arbacadii laga soo ridey diyaarad militari oo ah Helicopter nooca loo yaqaan Black Hawk. Waxaana warku sheegay in diyaaradaas ay ku dhinten toddobo ciidanka Maraykanka. Waxaa diyaaradaas Arbacadii lagu soo ridey agagaarka magaalada Karbala. [TV_ga Canada]. Diyaarada labaad oo ah Jet nooca loo yaqaan F/A-18 Hornet ayaa maanta oo khamiis ah lasoo ridey, sidaas waxaa weriyey TV-ga Maraykanka ee loo yaqaan ABC.
Jariidada the Guardian ayaa sheegtay in GUJI....
WARARKII APRIL 2, 2003